Wasiir ku xigeeno lagu dhaariyaay Madaxtooyadda Graoowe – Radio Daljir
Wasiir ku xigeeno lagu dhaariyaay Madaxtooyadda Graoowe
Maajo 13, 2018 12:55 g 0
Waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 13 May 2018 xarunta Madaxtooyada Puntland ee Garoowe lagu dhaariyey Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Daahir Xaaji Khaliif iyo Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Kaluumeysiga iyo Khayraadka Badda Cabdiraxmaan Salaad Maxamuud.
Munaasibadda Dhaarta waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Garoosre ka socday Maxkamadda sare ee Puntland ayaa dhaariyay Wasiiradda
Wasiirada maanta la dhaariyey oo lagu magacaabay Digreeto kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha taariikhdu markay ahayd uu malin nimadii shalay ahayd 12 May 2018, ayaa Madaxweynuhu kula dardaarmay in si xilkasnimole ay ugu adeegaan shacabka ay xilalkani uqabteen, isla markaana ay ka dhawr-soonaadaan wax walba oo shaqadooda hakad gelinaya, kana hor joogsanaya dardargelinta hawlohooda wasaaradaha ay ka hawl-geli doonaan.
wuxuu xasuusiyey labada masuul ee maanta loo dhaariyey in ay ku hawl galaan siyaasada dawladda ee Puntland Ha isku tashato, iyadoona weliba Madaxweynuhu xusay in dalka uu ka socdo horumar lixaadle oo lagu taaba-gelinayo kor u kicida dhaqaalaha iyo mashaariicda horu marineed.
Ugu danbayn, Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kula dardaarmay masuuliyiintani inay si daacad ah ugu adeegaan dadkooda iyo dalkoobada, kana soo baxaan shaqada loo dhaariyey ee ah inay u adeegaan shacabkooda, dalkooda, iyo Diintoodaba.